Nhau - Richava iro rakasviba bhiza reGore rino maScholarship?
Rinenge riri rima bhiza reGore rino reSADJ Awards?
Mwedzi wapera, iyo SDJ yegore rose yakazivisa runyorwa rwevamiriri. Mazuva ano, mibairo yeSDJ yave iri vane yeiyo bhodhi mutambo wedenderedzwa. Vanhu vazhinji vanotonga mwero wemutambo kuti vaone kana wakakunda dzakasiyana bhodhi mutambo mibairo, tisingatauri mutambo weSDJ wakasarudzwa zvakanakidzwa nevatambi veGerman.
Sarudzo dzegore rino dzeSDJ Mubairo dzinosanganisira Iyo Adventures yaRobin Hood, Guta Diki: Visi Guta (inowanikwa muChina) uye Zombie Teenz Evoluton.
Maitiro eiyo SDJ Mubairo: Mutambo wekusarudza unofanirwa kuve unonakidza uye vateereri vanofanira kunge vakafara. Gore rino, izwi-remuromoNyaya Huru Muguta Dikiinoputika zvikuru. Ini ndinoshamisika kana ichigona kuhwina iyo SDJ?
Kusarudzwa kweiyo Kinderspiel des Jahres Mubairo ndeye Mia London, Dragomino (vhezheni yevana ye Domino Humambo) uye Vatauri venhau.
Iyo Kennerspiel des Jahres inopa iyo bhodhi yemutambo vatambi vanonyanya kufunga nezvayo ichave ichazvarwa pakati Dombo Age 2.0: Prehistoric Tribes (Paleo), Akarasika matongo eArnak uye Anofungidzira Matunhu(Nzvimbo Dzakanaka). Mitambo miviri yekupedzisira inogona kutengwa kuChina.
About Dombo Age 2.0, takazvizivisa muchinyorwa chegore rapfuura. Iyo SDJ mumakore maviri apfuura yanyanya kuwedzera kuvhiringidza, kunyanya iyo Kennerspiel des Jahres Award. Ini ndinonzwa kuti zano uye kuoma zvadzikira. Asi nhasi tichataura nezvemutambo wakafanana nemakwikwiKuenda, Akarasika matongo eArnak.
Kubva payakaburitswa, yanga yakaturikwa paBGG hot hot list, uye ini ndagara ndichingoda kuziva nezve kwayo kwayakatangira.
Ongorora nzvimbo isina kudzidza
Matongo Akarasika eAnakichinhu chinonakidza chekutsvaga uye mutambo wekunakidzwa. Vatambi vanozoita senhengo dzeboka rekufambisa uye voongorora matongo ekare uye asinganzwisisike panguva yekufamba kwavo:Arnak Matongo. Panyaya yemuchina, uyu mutambo unobatanidza DBG (kuvaka kadhi) + kuiswa kwevashandi.
Vagadziri vemutambo Mín uye Elwenvari vaviri. Vasati vava vagadziri, ivo vakashanda sevanoongorora mutambo kwenguva yakareba. Ichi chinzvimbo chinovapawo nerubatsiro rwakawanda, kuitira kuti vave nekunzwisisa kuri nani kweanogadzira michina yemutambo uye nezvinodiwa nevatambi.
DBG + ine mushandi wekuisa mutambo haina kuwandisa kana kushoma, asi Arnakzvirinani mukujekesa kweyemutambo mashandiro uye kujekesa kwemaitiro. Pakutanga kwemutambo, mutambi mumwe nemumwe achatanga aine makadhi matanhatu muruoko, anoti: madhora maviri, macambasi maviri, uye maviri makadhi ekutya. Mutambi wekutanga ane mukana, uye wechipiri mutambi ane zvekushandisa.
Munharaunda yega yega, mutambi anogona kusarudza chimwe cheanotevera zviito zvikuru zvinomwe: Chekutanga, unogona kusarudza ① kuburitsa basa munzvimbo inozivikanwa ② kuvhura chiteshi chitsva. Mutambi wega wega ane vashandi vaviri chete, saka shandisa zvakanaka.
Gare gare, kana iwe ukavhura chiteshi chitsva, unogona kuita chiito che ③kuuraya mhuka. Panguva ino, iwe wapinda munzvimbo kuti uongororeArnak. Idzi nzvimbo dzakavanzika dzakachengetedzwa chinyararire nevatsvene vevatsigiri.
Iwe unogona kubhadhara inoenderana zviwanikwa zvekurwisa zvikara, uye nekupa mubairo mapoinzi mashanu uye zviwanikwa zvemwari wekuchengeta. Ehezve, iwe unogona zvakare kusarudza kusarwa nezvikara, iwe unowana kadhi rekutya uye neshangu. Iyi futi nzira inowanzo shandiswa neDBG: kudzikiswa mamaki pakupera kwemutambo, raiti kadhi raibhurari.
Zvino, kana uchiri nemari (kana kuti wakachengeta mari), unogona kuita zviito zveKutenga makadhi uye ⑤kutamba makadhi. Kadhi rebhuruu ikadhi rekugadzira, iwe unofanirwa kubhadhara nekambasi, uye iwe unogona kuita nekukurumidza mushure mekutenga. Kadhi rakasvibirira ndiyo kadhi yemidziyo, inomiririra maturusi kana vatakuri vanogona kushandiswa mukufambisa.
Chekupedzisira pane chimwe chakakosha mashandiro mumutambo: Kukwira iyo track. Kune matatu marudzi ezvinyorwa: goridhe, sirivheri nendarira. Mukuita kukwira nzira, iwe uchapihwawo mubayiro nemubatsiri. Chekupedzisira chiito iwe chaunogona kusarudza i ⑦Pass.
Kana maround mashanu apera, mutambo wapera. Iye mutambi ane mapoinzi akawanda anokunda.
Yakazara mutambo mamaki = track alama + pani nzvimbo mamaki + monster mamaki + kadhi mamaki-kutya mamaki
Semutambo weDBG + wevashandi wekuisa, iye mugadziri anosanganisa sei izvo zviviri? Mínakatipa mhinduro. "Mukuita, isu tinofanirwa kugadzirisa dambudziko rakakosha: mumutambo wekuisa vashandi, unosarudza kuita mudenderedzwa; asi mumutambo weDBG, iwe unotamba combo kuburikidza nemubatanidzwa wemakadhi, ayo ane chinokanganisa chiitiko.
Zvisinei, mumutambo wedu, hatigone kurega mutambi aine ruoko rwakazara rwemakadhi, asi isu tinogona chete kuita chiito chekuisa vashandi; kune rimwe divi, hatigone kurega mutambi achitamba makadhi ese nekuisa vashandi vese. Iyi ndiyo poindi inoda kuyerwa. Naizvozvo, isu takafunga "kuumbiridza" chiito ichi: Vatambi vanogona chete kuita chiito chimwe chete kutenderera, uye vanogona kutamba kadhi zvichibva pamhedzisiro, kana ivo vanogona kusarudza kuenda kunzvimbo nyowani ku "archeology". "
Kunyangwe ichingohwina iyo 2020 yeGood Geek yakanakisa kudoma zita, hunyanzvi hwaAnak haurasikirwe nemitambo yakawanda yekuhwina mibairo zvachose. Pano, izvo zvaunoona inyika inoyevedza, uye iyi haisi nyore DBG kana maindasitiri mutambo.
Inofananidzwa nemutambo wakasarudzika weiyo Kennerspiel des Jahres Mubairo gore rino, hunyanzvi hwe Arnakndiyo inonyanya kusiyanisa. Mutambi wemutambo (Milan Vavroň) zvakare yakadhirowa mifananidzo ye Mashiripiti Knight uye 1824: Austro-Hungarian Njanji.
Kwete izvozvo chete, mahieroglyphs muzvinyorwa zvakatengwa nevatambi mumutambo zvese zvakagadzirwa na Mín.
Pakutanga, Mínvakaita hurukuro refu nechikwata cheunyanzvi. Vakarangana uye vakurukura nezvechitarisiko chechitsuwa uye nevanhu vakambogara muAnaque: mararamiro avo, zvitendero uye nyaya dzavanoratidza.
Rini Ondřej Hrdina akatanga kutora mifananidzo, Mín akatanga kunyora nyaya inonzi Nhoroondo yaAnaqueuye kuona maonero acho kuburikidza nemifananidzo. Mushure mekuvaka iyo sisitimu, zvese zvasara kuzadza iwo ruzivo. Isu tinotsanangura iyo jogirafi, mamiriro ekunze, zvinomera uye zvipenyu zveArnak Island uye nemararamiro evanhu…
Ngano uye chitendero chikamu chakakosha chetsika, uye iwe unogona kuona mumifananidzo yavakasiya kumashure: zvimiro zvetsika, nzvimbo uye nyaya dzinoratidzwa pamadziro.
Pakazara, ndinoda mutambo uyu zvakanyanya. Sevadiki vechidiki,Mín uye Elwenhaina kungo gadzira "maviri maitiro" suture monster mutambo, asi yakavaka pamusoro wepashure nhoroondo (yakanyanya kukwana degree), ichibatanidza zvakanakira DBG uye kuburitswa kwemaindasitiri, dhizaini iri pachena, mutambo mutambo hauremerane, mitemo zvakajairwa uye hazvina kuomarara, uye yega nzira ine mavara akajeka. Uyu zvirokwazvo mubairo-unohwina bhodhi mutambo.
Iyo 2021 SDJ ichaziviswa muna Chikunguru 19th. UnogonaArnak, iyo yakahwina mazita mana uye mukombe kubva kuGolden Geek, kuhwina iyi hondo?
Nyaya yekudyidzana: Unofunga ndiani anohwina mubairo weKennerspiel des Jahres Award gore rino?
Tsika Dhaisi, Tsika dzekutamba Makadhi, Mucheka Mats Bhodhi Mutambo, Tsika Yakadhindwa Playmat, Kadhi Sleeve, Kusimbiswa Makadhi MuMapuranga Anobata,